आरजु राणा देउवाले मच्चाइन् खुलेआम लुट, महामारीका बेला अवैध धन्दा ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/आरजु राणा देउवाले मच्चाइन् खुलेआम लुट, महामारीका बेला अवैध धन्दा !
आरजु राणा देउवाले मच्चाइन् खुलेआम लुट, महामारीका बेला अवैध धन्दा !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती तथा नेत्री आरजु राणा देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका बेला खुलेआम लुट मच्चाएको खुलासा भएको छ ।
नेत्री राणा सञ्चालक रहेको ललितपुरको खुमलटारस्थित युलेन्स स्कूलले बैशाखदेखि असारसम्मको शुल्क अनिवार्य तिर्न निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनका बेला पठनपाठन नभएकाले शुल्क नमाग्न देशैभरका स्कूललाई निर्देशन गरेको बेला नेत्री राणा सञ्चालक रहेको स्कूलले अभिभावकलाई दबाब दिइरहेको छ ।
स्कूलले आकस्मिक कोष लगायत विभिन्न बहानामा अभिभावकलाई बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको जनाइएको छ । नाम नखुलाउने शर्तमा एक अभिभावकले भने, ‘चैत्रको पूरै शुल्क लिएका छन् । बैशाखदेखि असारसम्मको २० प्रतिशत घटाएर शुल्क मागेका छन् । तत्काल पैसा बुझाउनु भनिएको छ ।’
स्कूलले गत महिना दिनदेखि दैनिक डेढ घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । तर नेत्री राणाको स्कूलले अवैध रुपमा शुल्क असुलिरहेको छ ।
आकस्मिक कोषको रुपमा उठाएको पैसाले शिक्षकलाई ल्यापटप खरिद गर्ने स्कूलले जानकारी गराएको समस्यामा परेका अभिभावकले जनाएका छन् । सरकारले चैत्र महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न निर्देशन गरेको थियो । शैक्षिक सत्र सुरू नभइ शुल्क मागेको भन्दै अभिभावकहरु सामूहिक रुपमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा लागेका छन् ।
विद्यालयका अनियमितता अनुगमन तथा नियमनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो छ । ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले शुल्क तिर्न बाध्य पारेकोबारे उजुरी नआएको बताए ।
‘पहिला एउटा स्कूलको आएको थियो, पैसा फिर्ता गर्न लगायौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘युलेन्सको विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’ कहिलेकाहीँ विद्यालय र अभिभावकबीच भएको सहमतिले समस्या पार्नसक्ने उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआई कसैलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाउन नमिल्ने उनले बताए ।
हाल सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था औपचारिक रुपमा बन्द रहेकाले यस्ता स्कूलविरुद्ध आएको उजुरीको आधारमा थप छानबिन गरिने उनले बताए । बन्दाबन्दीको समयलाई बर्खे बिदामा रुपान्तरण गरेर निरन्तर कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । मिडिया डबलीबाट
मलेसियाको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ‘सेक्युरिटी गार्ड’ को हुन् ?
दीपाश्री राजेश प्रकरण : दीपाश्रीले माफी मागे पनि दर्शक रिसाए, आँफुलाई महानायक भनेपछि दीपकले खोले मुख
राजेश हमालले सार्वजनिक गरे राजा विरेन्द्र आफ्नो घर आएको दुर्लभ तस्विर